ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Romance ကို, ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့လုပ်ပါအရာတစ်ခုခု?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 21 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်အဘိဓါန်တွင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို '' အချစ် '' ဖွင့်ကြည့်ပါကတစ်ဦးဆိုင်နာမ်နှင့်ကြိယာနှစ်ခုလုံးအဖြစ်စာရင်းသွင်းသည်! ဒါကြောင့်အချစ်ကိုအတိအကျအဘယ်သို့သောအ?
ငါတကယ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုရုန်းကန်ဖို့အသုံးပြုအခါငါတကာလကိုပြန်မှတ်မိနိုင်, ငါအထူးသဖြင့်ဖြစ်သူနှင့်အတူရှိ၏နှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏အသေခံသောဆက်ဆံရေး '' ကိုကယ်တင် 'ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျနော်တို့အပတ်တိုင်းက 'ရက်စွဲညရှိသည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. ဒီအိုင်ဒီယာကိုမှားဘ​​ယ်အရာမျှမရှိပါ, တကယ်တော့တစ်ဦးအပတ်စဉ်ထုတ် '' ရက်စွဲညရှိခြင်း, ငါသည်တက်ကြွစွာလုပ်ဖို့ငါ့ clients များအားပေးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်, သို့သော်ငါသည်အဘယ်သို့ဒီအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုမှတ်မိကျွန်တော်အပေါ်သွားလေ၏မည်မျှရက်စွဲများပဓာနမကျဘဲဖြစ်ပါတယ်, ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းအားပြန် လာ. ဘယ်တော့မှမ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီ. ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ဘယ်လိုမကြာခဏကျွန်တော်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာ setting ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထဲကစားပွဲပေါ်မှာအနှံ့ထိုင်နေတော်မူသောအရာကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်း, ရှိပါသည် ဆဲ ဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာသည်ငါတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမအချစ်ဇာတ်လမ်း.
၎င်းသည်သင့်အားသင်အတူတကွအကျင့်တို့ကိုကျင့်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြ, များစွာသောလူ '' စိတ်ကူးယဉ် 'အဖြစ်ရည်ညွှန်းမည့်, အပြုအမူနောက်ကွယ်ကခံစားချက်များရှိနေကြသည်မဟုတ်လျှင်သို့သော်ထို့နောက်တကယ့်မှာအားလုံးသိပ်ရင်ခုန်စရာမခံစားရဘူး, တကယ်တော့ဒါဟာအံဆွဲတူခံစားနိုင်. အကယ်. သင်သည်သင့်တဲ့မုန့်ညက်ကိုထုတ်ကျော်နှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏ကြောင့်ပဲညာဘက်ခံစားရဘဲရှိသည်? , Conversation လှီနဲ့အဆင်မပြေခဲ့, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းလေထုထဲတွင်တင်းမာမှုနှင့်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုရှိ၏. ဤဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အခါကသင်ဘယ်လောက်ရင်ခုန်စရာထို setting ကိုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုအရေးမပါဘူး, ဒါကြောင့်ပဲ '' အချစ် '' ကိုတက်တူညီသောပါဘူး. ထို flipside တွင်ငါသည်လည်းပဲမှာအားလုံးရင်ခုန်စရာမဟုတ်ကြငါတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအမှုတို့ကိုပြုသည့်အခါကာလ၏တွေးခေါ်နိုင်, မိုဃ်းကိုရွာစေ၌အကြှနျုပျတို့၏ wellies အတွက်ရွှံ့လျှောက်သွားတူ, သို့သော်လည်းပဲ ခံစားခဲ့ရ ရင်ခုန်စရာ, ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသူနှင့်အတူမျှဝေခံစားချက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှု၏.
ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းစွာအငြင်းအခုံခဲ့သောသင်တို့၌အတူတကွထွက်ကိုမြင်သောသူတို့အားစုံတွဲများအကြောင်း - သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းဘယ်လောက်ရင်ခုန်စရာဖြစ်လိမ့်မည်? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်, သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကရေခဲချိုးဖဲ့ကြောင်းရင်ခုန်စရာတစ်ခုခု ပြု. နောက်တဖန်မေတ္တာစိတ်ခံစားချက်များဖြစ်ပွားစေလျှင်. တကယ်တော့သူတို့တွေကလုပ်-up ကလိင်ပူဖြစ်နိုင်သည်ဟုမဆို? (ငါ့အမျိုးသမီး clients များအကြောင်းမူကား, ငါသည်တသမတ်တည်းသည်အဘယ်ကသာချစ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှဆက်ဆံရေးကိုသွားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်, အစားပူအအေးထက်).
ငါလူအားကြာမြင့်စွာလမ်းဝင်သောအခါဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့အ vouch နိုင်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ၏ မိမိအသောမိန်းမအဘို့အရင်ခုန်စရာတစ်ခုခုကကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်, ဖြစ်ကောင်းကပြောပါတယ်သောမိန်းမကသာယောက်ျားကပြောပါတယ်ချိန်းတွေ့ခဲ့လျှင်တောင်မှ, သူမသေးကိုယ်တော်နှင့် ပတ်သက်. သေချာမဟုတ်ခဲ့, အမြင်ကျယ်သောစကားပြောခြင်းအမျိုးသမီးတွေရင်ခုန်စရာမူအယာများနားလည်သဘောပေါက်. ပင်ဒီဇာတ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးထိပ်ကျော်သို့သော်, မလိုချင်တဲ့ရင်ခုန်စရာလက်ဟန်ခြေဟန်လည်းမသက်မသာဖြစ်ရနိုင်တယ်, ဒါကြောင့်အဘယ်မှာရှိလိုင်းဖြစ်ပါသည်?
အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကအားလုံးကိုအခြေအနေများတွင်သင့်လျော်သည်နှင့်မဘာကြောင့်မ? ဒါကြောင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်မေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်ကလောင်ကျွမ်းဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်မည်? ဤမေးရန်စိတ်ဝင်စားဖို့မေးခွန်းများ.
ဒါဟာကျိန်းသေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏အငြင်းအခုံင်. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်မအချစ်ခံစားချက်ကြောင်းအကြံပြု, အပြုအမူသို့မဟုတ်အပြုအမူတစ်ခုစီးရီးကသွင်းရနိုင်သည့်. ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့လင်သည်ငါတို့အဘို့anice ရက်စွဲစီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင်, အကြှနျုပျကိုထုတ်ခြင်းငှါအားထုတ်ကိုသွားပြီး, သို့မဟုတ်သူကိုငါ့အဘို့ပန်းပွင့်ကြီးတစ်စည်းနှင့်အတူအိမ်တွင်တက်ပြသ, ဤအမှုသည်ငါ့၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာတုန့်ပြန်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်. ငါအချို့လမ်းခံစားရလိမ့်မည်ငါသည်သူ့ကိုနှင့်မျှဝေပါလိမ့်မယ်. ငါသည်ထိုပြုတော်မူပြီငါကောင်းခံစားမိစေမည့်အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးပြုံးလိမ့်မယ်. ဤ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, သူ့ကိုကောင်းခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်.
သို့သော်အဘယ်သို့သောအကြှနျုပျကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသည်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့အရင်ခုန်စရာခံစားချက်တွေကိုဖန်တီးနေတဲ့စွမ်းရည်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည် အားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားဖြင့်! အဘယ်သို့ငါဒီနားမှာဆိုလိုသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာဆိုရင်သူမရဲ့ပျော့ပျောင်းတွင် 'ဖြစ်' ဖို့စိတ်ဓါတ်တွေရလာစေတယ်အခါဖြစ်ပါသည်, ဣတ္စွမ်းအင်ကို, သူမစိတ်ကူးယဉ်ခံစားနိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမပစ္စုပ္ပန်လည်းမရှိလျှင်ပင်. ဒီခံစားချက်ပူပြင်းတဲ့ရေချိုးခန်းသုံးပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ဖယောင်းတိုင်, တစ်ခုရနံ့ကုထုံနှိပ်နယ်နှင့်အတူ, အဆင်းလှအဝတ်များနှင့်အခြားနည်းလမ်းများအတွက်ဒိုင်ယာလော့. ထို့ကြောင့်ဤယောက်ျားပိုစေပါဘူး? မလုပ်ပါနှင့်, ထိုဆန့်ကျင်ဖို့အတော်လေး, ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပျော့ပြောင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနိုင်သည့်အခါကအကြံပြု ခံစားချက် ရင်ခုန်စရာ, ဤသူသည်ဒီခံစားချက်မှထပ်ဖြည့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုလုပ်ရင်သူမရဲ့ယောက်ျားဟာတန်ဖိုးထားလေးစားသည်သူ့အဘို့ space ကိုဖွင့်လှစ်.
သင်ချိန်းတွေ့ဖို့ငါ့ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းမသိလျှင်ငါသည်သင်တို့ဆက်ဆံရေးအတွင်းပုလ္နှင့်ဣတ္စွမ်းအင်ကိုအခန်းကဏ္ဍအတွက်ယုံကြည်သိရကြလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဣတ္သောမိန်းမအဘို့အကျွန်ုပ်သည်ထိုမိန်းမကိုလူအဘို့စိတ်ကူးယဉ်မှုအရာတို့ကို '' အကျင့်ကိုကျင့် '' အကြံပြုမည်မဟုတ်, သို့သော် '' ခံစားမှု '' တစ်ဦးရင်ခုန်စရာအာကာသသို့လာပြီ '' ဟုမခံရ ', ပြီးတော့သူမ၏ယောက်ျားနှင့်အတူသာယာလှပသောနိုင်ဝေမျှခြင်း. ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ပျော်ရွှင်စေတယ်လို့ပုလ္ဖြစ်နှင့်သူမ၏အဘို့အမှုအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်အားဖြင့်သူ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏စိတ်နှင့်တွေ့သည်မိမိလိုအပ်ချက်နှင့်တန်းတူပြောဆို. သင်တစ်ဦးသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမိုအချစ်ဇာတ်လမ်းလိုပါလျှင်ငါသည်ဤကြိုးစားနေဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်. သင်တစ်ဦးသည်လူများမှာနှင့်သင်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦး '' အနိုင်ရ '' ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ချိန်းတွေ့နေကြတယ်, သို့မဟုတ်နောက်ကျောသင်လက်ရှိ၌ရှိကြ၏ဆက်ဆံရေးဖို့စိတ်အားထက်သန်ဆောင်ခဲ့ကြ, ကျနော်အကြံပြုသည်သူ့အဘို့စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုခု '' လုပ်နေတယ် '', အပြုအမူနောက်ကွယ်မှအချစ်ဇာတ်လမ်း၏စစ်မှန်သောစွမ်းအားတော်နဲ့!